Afrikada Fashion Show 13: Isabelle Anoh ayaa lumiyay erayada guusha daabacadan - Abidjanshow.com - TELES RELAY
ACCUEIL » DADKA & LIFESTYLE »Isku soo Dhiibo Xaaladda Dhaqan-Xareed Ee Islii.
Afrikada Fashion Show 13: Isabelle Anoh ayaa ku guulaystay ereyada guusha daabacaddaan - Abidjanshow.com
Wareegga ayaa ku dhacay daabacaadda 13e ee sannad-guurada sanadlaha ah ee ciyaaraha Afrika ee Abidjan oo uu hogaaminayey Isabelle Anoh, sabtida habeenkii Sabtida 17 November 2018. Hotel ku yaala Palais d'Congrès oo ku yaala Ivory, ayaa jilayaasha filimka loo doortay munaasabadda ayaa si cad u muujiyay tayadooda.
Mowduuca mawduuca: "Waxyaabaha Afrikaanka ah ee wajahaya caqabadda diyaar u ah in la xidho", Abuurayaashu sida Ibrahim Fernandez, Lolo Andoche Arlette Konan, Nabu abuurkii Gregory Piwele, Pathé'O iyo kuwa kale, soo bandhigay ay uruuriyeen ugu dambeeyay.
Sidoo kale akhri: Sawirada Afrikada 13
Guud ahaan, waxaa jira in ka badan daraasado diyaargarow ah kuwaas oo ku caanbaxay tafaasiil T Afrran Fashion Show 13.
Dhammaantood waxay soo iftiimiyeen hoolka Hotel Sofitel Hotel Ivory Congress Centre iyada oo ay soo bandhigeen ururadooda Afrikaanka cusub. Dean Pathé'O oo xiray daahitaanka daabacaddan, ayaa runtii dhigay baraha sare ee uu sameeyey ugu dambeeyay.
Abidjan oo ah nooca ugu weyn ee Abidjan ayaa dhab ahaantii muujisay mabda'a Afrikaanka ah iyada oo loo marayo tartan iyo hal-abuurnimo ee jilayaasha Afrikaanka ah.
Munaasabadan oo ay soo bandhigeen Yves De Mbella iyo Mariam Coulibaly ayaa ahaa guusha guud ee ay ku joogaan shakhsiyaad badan. Laakiin sidoo kale waxay u mahadcelineysaa bandhigyadii fannaaniinta Josey, Kerozen, Savan Allah iyo qaar kale oo badan oo bixiyay shamuus gaar ah oo fiidkii ah.
Sidoo kale akhri: Afrikada Fashion Show 13: Xarunta Golaha Congresska
Dadwaynaha keligood iska leh, waxay ku farxi karaan farxadda ay bixiyaan fanaanyadan.
Isabelle Anoh oo sidan oo kale ah, ayaa xitaa lumay iyada luuqadeed iyada oo dadweynaha ku sugan qolka qolka, qolka kor u qaadista.
Sidaa daraadeed, waa daabacaad aad u caan ah waxaana uu u oggolaaday guud ahaan abuurayaasha Afrika inay fahmaan in mustaqbalka cayaaraha African uu diyaar u yahay inuu xirto. Isabelle Anoh ayaa ku casuumay kooxda dambe inkasta oo ay dhibaatooyin kala kulmaan.
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://www.abidjanshow.com/lifestar/mode/afrik-fashion-show-13-isabelle-anoh-perd-les-mots-face-au-succes-de-cette-edition
The 25 Richest People ee Silicon Valley
Sababtoo ah khabiirada boqortooyadu waxay ku qanacsan yihiin in Meghan Markle uu cunsuriyadeeyn doono sawirka cunuga boqortooyada ka dib dhalashada
Cecilia Tonye, ​​aasaasaha Keiki: marka dareenka caruurta loo geeyaa goobta ganacsiga
Xubno ka soo horjeeda iyo dhibaatada Anglophone ee Cameroon: Baarlamaanka Yurub ayaa kor u qaadaya garoonka - JeuneAfrique.com
Khaled al-Anani, Wasiirka Masaarida Masaarida: "Dhaxaladayadu waa tan Bani'aadamka" - JeuneAfrique.com
Senegal: Dakar waa magaalo nadiif ah, mas'uuliyadda muwaadinka ama gobolka? - YoungAfrica.com
Dhibaatooyinka Tunisair: "Dhibaatooyinka Dhibaatadu waxay u keentaa dhibaatooyinka dhinaca ammaanka" - JeuneAfrique.com